Wararka - Horumarinta iyo adeegsiga mica synthetic
Horumarinta iyo adeegsiga mica synthetic
Mica waa magaca guud ee macdanta silica leh, oo leh astaamaha kuleylka, daahfurnaanta, iska caabbinta kuleylka, iska caabinta daxalka, kala-goynta fudud iyo fiiqista oo ay ka buuxdo dabacsanaan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa waxyaabaha la isku qurxiyo, balaastigyada, caagga, dahaadhka, kahortaga daxalka, qurxinta, alxamida, tuurista, qalabka dhismaha iyo beeraha kale, iyadoo door muhiim ah ka ciyaareysa dhaqaalaha iyo dhismaha difaaca.
I. Cilmi baaris iyo horumarinta mica synthetic
Marka loo eego "mica synthetic", sanadkii 1887, saynisyahano Ruush ah waxay isticmaaleen fluoride si ay uga soosaaraan qaybta ugu horeysa ee fluoropoly mica dhalaalka; 1897, Russia waxay bartay ficil ahaan xaaladaha sameynta macdanta. 1919, Jarmalka Siemens - Halske company waxay heshay rukhsaddii ugu horeysay mica of synthetic mica; Mareykanku wuxuu qabsaday dhamaan natiijooyinka cilmi baarista ee kusaabsan mica synthetic kadib dagaalkii labaad ee aduunka .Tan iyo iska caabinta heerkulka sare, waa shey muhiim u ah difaaca iyo tikniyoolajiyadda, gobolka United wuxuu sii waday inuu cilmi baaris ku sameeyo arimahan.
Marxaladda bilowga pg Shiinaha, mica-ga dabiiciga ah wuxuu qancin karaa dhaqaalaha qaranka iyo horumarka. Si kastaba ha noqotee, horumarka degdegga ah ee tamarta, warshadaha aerospace, mica-da dabiiciga ma sii buuxin karin shuruudaha. Qaar ka mid ah hay'adaha Shiinaha waxay bilaabeen inay bartaan mica synthetic.
Hay'adaha cilmi-baarista ee sayniska oo ay weheliyaan iskuulada, dowladaha iyo shirkadaha ayaa sameeya cilmi-baarista iyo soo-saarista mica synthetic-ka oo galay marxalad qaan gaadh ah illaa iyo hadda.
II. Faa'iidooyinka mica synthetic marka la barbar dhigo mica dabiiciga ah
(1) Tayada xasilloonida oo ay ugu wacan tahay isla qaaciddada iyo saamiga alaabta ceeriin
(2) Nadiif & dahaadh sarre; ma jiro il shucaac ka soo baxa
(3) Bir culus, ka yar heerka Yurub iyo midka gobolka.
(4) Iftiin sare iyo caddaan (> 92), maadada midabka luul qalinka ah.
(5) Maaddada midabkeedu yahay luul iyo madmadow
III. Isticmaalka Comprehensive of mica synthetic
In warshadaha mica, waxaa lagama maarmaan ah in si buuxda loo isticmaalo qashinka mica ee ku ag yaal xaashida weyn ee mica Halkan waxaa ah isticmaalka ballaaran ee mica synthetic sida soo socota:
(1) soosaar budada mica
Astaamaha: Sibidh wanaagsan, daboolid adag iyo isku dhejis.
Codsiga: daahan, dhoobada, anti-daxalka iyo warshadaha kiimikada.
Huajing mica synthetic wuxuu leeyahay dhismo dhameystiran, daahfurnaan iyo saamiga weyn, taas oo ah waxa ugufiican midabka luul.
(2) Dhoobada mica ceramics
Qalabka ceymiska macmalka ah waa nooc isku dhafan, kaas oo leh faa'iidooyinka mica, dhoobada iyo caagagga. Waxay leedahay xasilloonida cabbirka, kuleylka wanaagsan, iyo iska caabbinta kuleylka.
(3) Wax soo saarka shubka
Waa nooc cusub oo ka mid ah maaddada dahaarka ku-habboon ee aan-dabiici ahayn oo leh caabbinta heerkulka sare, iyo ka-hortagga daxalka.
Faa'iidada: daboolka sare, xoogga farsamada, iska caabinta shucaaca, iska caabinta qiiqa iyo wixii la mid ah.
(4) Saxanka macmalka ah ee kululaynta saxanka
Kani waa qalab cusub oo shaqeynaya, kaas oo lagu sameeyay daaha lakabka filimka semiconductor ee saxanka mica synthetic. Maado ahaan qalabka guryaha, waa qiiq la'aan iyo dhadhan la'aan heerkulka sare, sidaa darteed si ballaaran ayaa loo adeegsadaa loona horumariyaa si xawli ah maalmahan.
(5) Midabaynta 'mica' midabaynta luul
Maaddaama mica synthetic uu yahay qalab macmal ah, walxaha cayriin waxay yeelan karaan xakameyn wanaagsan. Sidaa darteed, birta culus iyo walxaha kale ee waxyeelada leh ayaa laga hor tagi karaa bilowga .Miikda macmalka ah wuxuu leeyahay daahirsanaanta sare, caddaan, dhaldhalaal, nabadgelyo, sun aan sun ahayn, ilaalinta deegaanka, iyo heerkulka sare u adkaysta .Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa daahan, caag, maqaarka, is qurxinta, dharka, dhoobada, dhismaha iyo warshadaha qurxinta.Waxa sii kordhaya horumarka teknolojiyadda mica synthetic, waxay saameyn weyn ku leedahay nolol maalmeedka, warshadaha la xiriira si dhakhso leh ayey kor ugu qaadi doonaan.